Hey’adda Nabadsugida oo soo bandhigtay xog ku saabsan qaraxyadii Ismiidaaminta ee Muqdisho ka dhacay – idalenews.com
Hey’adda Nabadsugida oo soo bandhigtay xog ku saabsan qaraxyadii Ismiidaaminta ee Muqdisho ka dhacay
Hey’adda Nabadsugida qaranka ayaa soo bandhigtay xog ku saabsan qaraxyadii Ismiidaaminta ee todobaadkii hore ka dhacay magaalada Muqdisho, kaasoo la doonayay in lagu qaarijiyo saraakiil ka tirsan Nabadsugida.
War saxafadeed ka soo baxay Nabadsugida qaranka ayaa lagu sheegay inuu ahaa mid fashilmay weeraradii ismiidaaminta ee ka dhacay Muqdisho, isla markaana la helay raadadka dadkii fuliyay weeraradaas.
Nabadsugida ayaa sheegay in qaraxii Isniintii la soo dhaafay ee ka dhacay agagaarka Ex Fiyoore uu ahaa qarax si deg deg ah lagu soo diyaariyay, isla markaana ruuxa fuliyay magaciisa lagu soo koobay C/qani, hase yeeshee waxaa war saxaafadeedka lagu sheegay inuu ninkan uu horay uga mid ahaa Amniyaadka Shabaab, balse lagu qanciyay inuu is qarxiyo.
“Qaraxa uu fuliyay C/qani waxaa lagu soo diyaariyay duleedka Muqdisho, gaari Surf uu watay ayuu Muqdisho dhuumasho kula soo galay, waxaa uu la saarnaa ruux kale oo loogu tala galay inuu qaraxa kula wehliyo, C/qani waxaa uu ka soo jeedaa Gobolka Galgaduud, gaar ahaan degmada Cadaado”ayaa lagu yiri War saxafeedka.
Sidoo kale qaraxa kale ee ka dhacay Khamiistii Suuqa Bakaaraha oo uu fuliyay wiil dhalinyaro ah ayaa la sheegay in wiilkan uu doonayay inuu isku qarxiyo Taliyaha howl gelinta Nabadsugida iyo Taliyaha Booliska Bakaaraha, hase ahaatee markii laga shakiyay uu is qarxiyay, iyadoo aan wax dhibaato ah geysan.
Wiilkan dhalinyarada ayaa la sheegay inuu watay buugaag, taasoo sabab u aheyd in laga helo macluumaad, waxaana magaciisa lagu sheegay C/raxiin Mukhtaar Aadan oo ka soo jeeda degmada Ceelbuur, waxaa uu dhiganayay Iskuulka Alcimra Branch five, markii laga helay warqada lacag bixinta.
War saxaafadeedka Hey’adda Nabadsugida ayaa sidoo kale lagu sheegay in Ciidamo gaar ah oo ka tirsan Nabadsugida ay habeen hore u daateen guri ay ku jireen ilaa sideed ruux oo loo diyaarinayay inay geystaan falal is qarxin ah, kuwaasoo la sheegay in laga soo qabtay xaafada Cali Turcaaye ee degmada Huriwaa.
Hey’adda Nabadsugida qaranka ayaa sheegtay inay sii wadeyso howl galada ka dhanka ah Al-Shabaab, si looga hortago falalka is qarxinta iyo weerarada kala duwan.
Taliska Booliska G/Banaadir oo sheegay in la soo qabtay dadkii ka dambeeyeen dilka haweeney